ယိုသူ မရှက်၊ မြင်သူ ရှက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ယိုသူ မရှက်၊ မြင်သူ ရှက်
ယိုသူ မရှက်၊ မြင်သူ ရှက်
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Sep 22, 2011 in Creative Writing | 26 comments
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တစ်နေ့တာ အရေးကြီး အလုပ်တွေထဲက ကိစ္စတစ်ခုကို ပြောရမယ်ဆိုရင် ……… ။ အယဉ်ကျေးဆုံး သုံးနှုန်းရရင် ‘အိပ်သာ သွားရခြင်း’ ကလည်း တစ်ခု အပါအဝင် ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အခု ဒီ post အတွက်တော့ ဒီစကားလုံးကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ အသုံးပြုသွားပါမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပေးထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်မှာကိုက ပါပြီးသားမို့ပါ။
အိပ်သာ တက်တာ၊ မစင်စွန့်တာကို အီးပါတယ်၊ အီးယိုတယ်လို့ သုံးကြပါတယ်။ ရွာဘက်တွေမှာဆိုရင် အရင်တုန်းက အီးယိုချင်ရင် ရွာအနောက်ဘက်ကို ထွက်ပြီး ယိုကြရတယ်။ ချုံကွယ်ပြီး ယိုကြတာပေါ့ဗျာ … ။ အဲဒီလို ယိုနေတုန်းများ လူတစ်ယောက်ယောက် တွေ့သွားရင်ဖြင့် ဘယ်လောက် ရှက်ဖို့ ကောင်းလိမ့်မလဲနော်။ ဒါပေမယ့်လို့ အချို့များကြတော့ မရှက်တတ်ဘူးဗျို့။ မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး ခပ်တည်တည်ပဲ။
ဒါကို ဥပမာထားပြီး ‘ယိုသူ မရှက်၊ မြင်သူ ရှက်’ ဆိုတဲ့ စကားဟာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပေါ့။
ရန်ကုန် ……. ။ ဆရာတိုက်စိုးရဲ့ စကားနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် ‘ ရန်ကုန်သည် လူလည်း ပေါ၏။ လူမျိုးလည်း စုံ၏ ‘ ပေါ့ ။ အဲဒီ ဆရာတိုက်စိုးရဲ့ စကားမှာ ကျွန်တော် နည်းနည်းလေး ထပ်ဖြည့်ချင်တာက ‘ရန်ကုန်သည် ဘတ်စ်ကားလည်း ပေါ၏။ လူလည်း ကြပ်၏။ အဆိုပါ လူကြပ်ကြပ် ဘတ်စ်ကားများပေါ်၌ သမီးရည်းစားများ လွတ်လပ်နေကြ၏’ ။
ကြိုက် မရှက်၊ ငိုက် မရှက်၊ ငတ် မရှက် ဆိုပြီး မရှက်သုံးပါး ရှိပါတယ်။ ကိုယ့် ရည်းစားရဲ့ လက်ကလေးကို ကိုင်၊ ပခုံးလေးကို ရွရွလေး ဖက်ပြီး ရန်ကုန်မြို့အနှံ့ လျှောက်သွားစမ်းဦးတော့။ ဒါဟာ ရှော့မရှိပါဘူး။ မြင်ရ၊ တွေ့ရသူတွေ အဖို့လည်း ဒီပုံစံမျိုးဟာ ရန်ကုန်ဆိုတဲ့ မြို့ကြီးမှာ ရိုးနေပါပြီ။ ကိုယ်ကြိုက်လို့၊ သူကြိုက်လို့ လူကြားသူကြား နှစ်ယောက်သား ပူးပူးကပ်ကပ် သွားလာကြတယ်။ အဲဒါဘာဖြစ်လဲ။ ကြိုက်လို့ မရှက်တာပဲ။ ဒါကို အပြစ်ဖို့လို့မှ မရတာ။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းမှာ …… ။
တစ်နေ့က ရုံးအပြန်မှာ ထုံးစံအတိုင်း လိုင်းကား စောင့်စီးရတယ်။ စီးတဲ့ ကားက လူသိပ် မကြပ်ဘူး။ ဒါကြောင့် လှည်းတန်း လည်း ရောက်ရော ထိုင်ခုံရတယ်။ ရတဲ့ ထိုင်ခုံက အတွဲတစ်တွဲရဲ့ အနောက်မှာ။ ဖြစ်နေလိုက်တဲ့ အတွဲဗျာ။ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံးကို မေ့နေကြလား မဆိုနိုင်ဘူး။ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ကိုယ် သူတို့ ပန်းခြံထဲ ရောက်နေတယ်လို့များ ထင်နေလား မသိဘူး။ ဖြစ်ပျက်နေလိုက်ကြတာ ကြည့်မိတဲ့သူတွေ မျက်နှာ လွှဲထားရတဲ့ အထိပါပဲ။ ကြုံဖူးတဲ့သူတွေ ပိုပြီး သိကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီလောက် ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ လူတွေ အများကြီးနဲ့။ ရိုးရိုးတန်းတန်း ဖက်ထားရုံလောက်ဆို တော်ရောပေါ့။ အခုဟာက … လွန်ကို လွန်လွန်းတယ်။ ဒါကြောင့် ‘ယိုသူ မရှက်၊ မြင်သူ ရှက်’ လို့ ပြောတာပါ။
အဲဒီလို အဖြစ်မျိုးကို တွေ့တွေ့နေရတာ နောက်ပိုင်းမှာ ပိုပြီး များလာပါတယ်။ သူတို့ မိဘတွေသာ သူတို့တွေ လူကြားသူကြား အဲဒီလိုမျိုး ဖြစ်နေကြတာ တွေ့ရရင် ဘယ်လို နေမလဲ မသိဘူး။
အခု မြန်မာပြည်က လူငယ်တွေ နိုင်ငံရပ်ခြားက လူနေမှုပုံစံတွေကို အတုခိုး ကျင့်သုံးလာတာ တွေ့ရပေမယ့် သူတို့ အတုခိုးတာဟာ မဟုတ်တဲ့ နေရာမှာ အတုခိုး လာကြတာလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြားက သူတွေရဲ့ စည်းကမ်း ရှိမှုတွေ၊ အလုပ်ကို ကြိုးစားပြီး လုပ်ကြတာတွေ စသည်ဖြင့် ကောင်းတဲ့ အမူအကျင့်တွေကို အတုယူတာတော့ အတော် ရှားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အပြစ်တင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြင်သင့်တာတွေကို မြင်စေချင်တာပါ။ ကျွန်တော်ရော ဘာကောင်လဲ ဆိုတော့ … ။ ဘာကောင်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ လူပါ … ။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဝေဖန်ရေး … ပေါ့။ အမြင် မတော်တာရှိရင် ဝေဖန်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို ပြောင်းလဲ နေပါပြီဗျာ။
ဆက်ပြောနေရင်ဆင်ဆာတွေငြိကုန်တော့မယ် တော်ပြီ ဒီလောက်ဘဲ
အခုတစ်လော အတွဲတွေက တော်တော်ဆိုးလာတာ
တစ်နေ့ကလည်း မနက် (63း0) လောက်ပေါ့ နွယ်ပင်က သင်တန်းသွားစရာရှိတော့ နွယ်ပင်ရဲ့ တစ်ယောက်သောသူကလိုက်ပို့ပေးတယ် ။ စီးတဲ့ ကားက (105) မနက်စောစောဆိုတော့ ကားကချောင်တာပေါ့
အဲ့မှာ ကားပေါ်တက်တက်ချင်းမှာပါ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေးက
ကိုရီးယားကားလိုပြောရရင် အကြင်နာပေးနေကြတာလေ နောက်တစ်လမ်းလုံးလဲ တီတီတာတာနဲ့ နွယ်ပင်ကလဲ တစ်လမ်းလုံး သူတို့ကို သိသိသာသာရေ မသိမသာရော ငေးလာလိုက်တာ ဘေးနားကပါလာတဲ့ တစ်ယောက်သောသူကိုတောင် သတိမရတော့အထိပဲ နောက် ဘေးနားကတစ်ယောက်သောသူကိုတောင် ရန်လုပ်ချင်လာတာ (သူက အဲလို တီတီတာတာ လုပ်ဖို့နေနေသာသာ လူကို ရှိတယ်လို့တောင်ထင်ရဲ့လားမသိဘူး လမ်းက ရှူခင်းလှလှတွေကို ငေးပြီးလိုက်လာတာလေ ) ဟိုကောင်လေးများ သူ့ကောင်မလေးကို ကြင်နာနေလိုက်တာ ကားခုန်တာတောင် ကောင်မလေး ပေါင်နာမှာဆိုးလို့ လက်ကလေးနဲ့ ခံထားပေးရှာတယ်လေ ……..
သြော်… နွယ်ပင်တို့များတော့နော် ကြေငြာပါ တစ်ခါထဲ တန်းဝင်ပါလေရော… သတိထားနော် မနောလည်း လိုင်းကားစီးတယ်။ လိုင်းကားပေါ်မှာ တစ်ယောက်သောသူနဲ့ တွေ့လို့ကတော့ သိတယ်မလား…
အများအားဖြင့် ကားတွေရဲ့ နောက်ဆုံးခုံမှာထိုင်တတ်ကြတယ်လေ။ ဒါကို မနောကတော့ နောက်ဆုံးခုံ ရှေ့တစ်ခုံဆိုတော့ လှည့်လှည့်ပြီး ဘုကြည့်ကြည့်ရတာ အမောပဲ… မနေ့ကအဖြစ်ကိုပြောပါတယ်။ သူတို့ကတော့ မနာလိုတာလို့ မြင်ရင် မြင်နေမှာပေါ့။
ကားပေါ်မှာ တစ်ခါကြုံဖူးတာ သူတို့ထက်ဆိုးပါတယ် …. ရေးရမှာတောင် ရှက်လို့ မရေးချင်ဘူး … နောက်ဆုံးတန်းက အမြင့်ခုံမှာထိုင်ပြီး ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေကြတာ တစ်ကားလုံးက မတ်တပ်ရပ်တဲ့သူတွေ အားလုံးမြင်နေရပါတယ် … ကောင်မလေးလက်က ကောင်လေးရဲ့ ………. ထဲမှာ …
ဘယ်ထဲမှာလဲ ဟင် မဝေ… မရှင်းမရှင်းကြီး
အိမ်စာတွေ မပြီးသေးလို့ နေမှာပါ နော
မယုံဘူးကွ နောက်တခါ ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့။ ဓါတ်ပုံနဲ့တကွ သက်သေပြမှ ယုံမယ်။း)
ကိုယ်ကတော့ ဗမာ မျက်စိ ဗမာ့ကျေးလက်ယဉ်ကျေးမှုက ငယ်ကတည်းက ယဉ်ပါးလာလို့ ဖြစ်မယ် အဲ့ဒါမျိုးတွေ မြင်ရင် စိတ်ထဲမှာ တမျိုးပဲ။ ဒီမှာလဲ လမ်းသွားရင်း အရှေ့က အတွဲက မီးပှိုင့်မှာ မီးစိမ်းစောင့်တုန်း ဗြုန်းဆို ပြင်သစ်အနမ်းတွေ ဘာတွေ ပေးကြရော ကိုယ့်မှာ မျက်နှာ ဘယ်ထားရမှန်းမသိဘူး။ သူတို့ကတော့ အေးဆေး မီးလည်းစိမ်းရော ကိုယ့်လမ်းကို ဆက်လျှောက်သွားတာပဲ။ ဘေးကလူတွေလည်း မထူးဆန်းသလိုပဲ။ ကမ်းခြေမှာလည်း အခင်းလေးတွေခင်းပြီး လူတွေ အများကြီးကြားထဲ နမ်းချင်နမ်းနေရော ကိုယ့်အနားမှာဆိုရင်တော့ ကိုယ်က ထွက်ပြေးရတယ်။ သူတို့က သူတို့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုပေမဲ့ ကိုယ်က ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှု မဟုတ်တော့ ကြားထဲက အချောင် မျက်နှာပူသလိုပဲ။ မြန်မာပြည်လည်း ကလေးတွေက တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်နဲ့အညီ ကမ္ဘာနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းလာတာ ဖြစ်မှာပါ။
“… ကောင်မလေးလက်က ကောင်လေးရဲ့ ………. ထဲမှာ ”
သြ … ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာဆိုတော့ လဲကျမှာ စိုးလို့ပေါ့နော်၊ အား.ဆောရီး ဆောရီး ထိုင်နေတာဘဲ..
“အမြင် မတော်တာရှိရင် ဝေဖန်ပါ”
အမြင် မတော်တာတော့ မြင်အောင် သွား ကြည့်တာကို။
မြန်မာတွေခောတ်နောက်မကျဘူးဆိုတာပြချင်လို့ပါ နော် လို့ ၊။
စာရေးသူက ဘယ်လိုကြုံတွေ့ခဲ့ရလည်း မပြောခဲ့ပေမယ့် ပြေးကြည့်တာထက် တွေးကြည့်တာက မှန်ပါတယ် … ။ ရှိတယ် အဲ့လိုလူတွေ …သောက်ရှက်မရှိတဲ့ လူတွေ .. တပုံကြီးပါပဲ … ။ တစ်ခါက ဓါတ်ပုံရိုက်ထားသေးတယ် .. သားအဖအရွယ်နှစ်ယောက်ပလူးနေကြတာလေ … ။ ကားပေါ်မှာ ဟီလာထပြီး မမြင်ချင်မှ အဆုံး မိန်းမရဲ့ လက်တစ်ဘက်က ယောကျာ်း ပုဆိုးအောက်ရောက်နေတယ် .. မှတ်တမ်းတင်ထားသေးတယ် တင်ရမှာ ရှက်လို့ မတင်ဖြစ်တာ ဟီး
မအီးတုံးရေ… မတင်ချင်ရင်လဲ mail နဲ့ sent ပေးပါလာ ဟင်… အချိန်ရရင်ပေါ့… ဟီးဟီး…
ပေသုံးသောင်းအမြင်(30,000 foot view)နဲ့ပြော၇ရင်..
အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေ.. လွှတ်တော်အမတ်တွေကို..မည်သူမဆိုဖြစ်ခွင့်ရှိလာတဲ့..အခြေအနေမို့.. လူငယ်တွေခေါင်းဆောင်စိတ်ဝင်လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်..။
အဲဒီတော့.. နောင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချိန်..အမဲစက်..လူပြောစရာ..မှတ်တမ်းကျန်ရစ်မှာတွေ.. သတိထားရှောင်လာကြမှာပါ..။
ဒါမျိုးတွေက.. သမဂ္ဂတွေဖွဲ့ခွင့်ရလာပြီး.. လူငယ်တွေ.. ခေါင်းဆောင်နေရာလုကြရတဲ့အခါတို့.. မီဒီယာကဖွံ့ ဖြိုးလာတာတို့….ဖြစ်လာပြီး..နောက်..ဖြည်းဖြည်းချင်း လျှော့သွားမယ်ထင်မိတာပါပဲ..။
ကိုKaiတွေးသလိုတွေးမဲ့ လူဘယ်နှစ်ယောက်ရှိမလဲ သိချင်ပ။
“မိန်းမရဲ့ လက်တစ်ဘက်က ယောကျာ်း ပုဆိုးအောက်ရောက်နေတယ်” အီး အီး တွေ များ ထွက်ကျလို့လားမသိဘူးနော်
ကျွန်မလည်းသိချင်စိတ် ပြင်းပြနေပေမဲ့ .. နှာဘူးမတော့ အဖြစ်မခံနိုင်လို့ … မျက်နှာလွှဲနေလိုက်ရတယ် မှတ်တမ်းလေးတော့ တင်ထားပါတယ် … အခွင့်အခါ ကြုံကြိုက်ရင် တင်ပါဦးမယ် …အက်စပဲ ရှဲလိဖော် အင်ထရို ပါ
သူတို့ ကာမပိုင်ပစ္စည်း သူတို့အသုံးချနေကြတာကို
မနာလိုတတ်ကြတဲ့ခင်ဗျားတို့သာ ငရဲအိုး ဇောက်ထိုးကျမှာ ကျဦးမှာ
( ရွာဘက်တွေမှာဆိုရင် အရင်တုန်းက အီးယိုချင်ရင် ရွာအနောက်ဘက်ကို ထွက်ပြီး ယိုကြရတယ်။ ချုံကွယ်ပြီး ယိုကြတာပေါ့ဗျာ … ။ အဲဒီလို ယိုနေတုန်းများ လူတစ်ယောက်ယောက် တွေ့သွားရင်ဖြင့် ဘယ်လောက် ရှက်ဖို့ ကောင်းလိမ့်မလဲနော်။ ဒါပေမယ့်လို့ အချို့များကြတော့ မရှက်တတ်ဘူးဗျို့။ မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး ခပ်တည်တည်ပဲ။ )
ဒီစာပိုဒ်ကိုကန့်ကွက်ပါတယ် ကျေးလက်မြို့ပြခွဲခြားတဲ့ အမှတ်သားလို့ ခံယူပါတယ်
သဂျီးမင်းမှ အရေးယူပေးပါရန် တောင်းဆိုပါတယ်
အခြားဆိုဒ်များမှနေ၍ ဤအကြောင်းကို အသိပေး၍ကန့်ကွက်ပါမည်
ရှင်းလင်းချက်။ ။ မစင်စွန့်ခြင်း တစ်နည်း အီးပါခြင်း တစ်နည်း ချီးပါခြင်း
တစ်နည်း ချီးလွှတ်ခြင်း တစ်နည်း ကျင်ကြီးစွန့်ခြင်း တစ်နည်း ဓာတ်သွားခြင်း
တစ်နည်း အစာဟောင်းများ စွန့်ခြင်း တစ်နည်း အလေးသွားခြင်း
တစ်နည်း အိမ်သာတက်ခြင်း စသည့်စသည့် ဤသောအမှု့သည်
သက်ရှိသတ္တဝါမှန်သမျှ လုပ်သော အမှု့ဖြစ်ပါသည်။ အထူးဆိုလိုခြင်သည်မှာ
ယနေ့ကမ္ဘာ့လူသားများသည် နတ် တို့နှင့်မတူပါ
နတ်တို့စားသော နတ်သုဒ္ဓါတွင် ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ဓာတ်များ မပါရှိသည့်အတွက်
နတ်တို့သည် နတ်သုဒ္ဓါကို စားပြီးတိုင်း မစင်စွန့်ခြင်း တစ်နည်း အီးပါခြင်း
တစ်နည်း ချီးပါခြင်း တစ်နည်း ချီးလွှတ်ခြင်း တစ်နည်း ကျင်ကြီးစွန့်ခြင်း
တစ်နည်း ဓာတ်သွားခြင်း တစ်နည်း အစာဟောင်းများ စွန့်ခြင်း
တစ်နည်း အလေးသွားခြင်း တစ်နည်း အိမ်သာတက်ခြင်း စသည့်စသည့်
ဤသောအမှု့တို့ကို မပြုပါ ( နတ်ပြည်တွင် အိမ်သာမရှိကြောင်းအထူးပြုသည် )
ကမ္ဘာ့လူသားများ စားသောအစားအစာများသည်သာ ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်
( ခွေး ကြောင် တိရိစ္ဆာန်များလည်း အကြုံးဝင်သည် ) အစာစားပြီးတိုင်း
မစင်စွန့်ခြင်း တစ်နည်း အီးပါခြင်း တစ်နည်း ချီးပါခြင်း တစ်နည်း
ချီးလွှတ်ခြင်း တစ်နည်း ကျင်ကြီးစွန့်ခြင်း တစ်နည်း ဓာတ်သွားခြင်း
တစ်နည်း အိမ်သာတက်ခြင်း စသည့်စသည့် ဤသောအမှု့သည် လူတိုင်း
သက်ရှိသတ္တဝါတိုင်း လုပ်သည့် အလုပ်ဖြစ်ပါလျှက် တောသားများကို ဥပမာပြုခြင်း။
တစ်နည်း အိမ်သာတက်ခြင်း အမှု့သည် ကလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့်
လုံးဝ အဲ့စလုပ်တလီ သက်ဆိုင်သည်ဟု ဆိုပါမည်။
ယနေ့ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အားလုံးကုန်သော လူသားတို့သည်
လူမှု့စည်းကမ်းများ ( နေရာေးသအလိုက်ကွဲပြား ) ကို
( ထိုသူများသည် လောကကို ဥပက္ခာ ပြုတတ်သည့်သဘောရှိပြီး
ကဲ့ရဲ့သူများသည် လောကကို ငါ ငါ့ဥစ္စာ လုပ်၍ တဏှာ သဘောရှိသည်ကို ဆင်ခြင်လေ )
ပြုသူပင် မရှက်ကြောက်လင့်ကစား မြင်ရသူများပင်ရှက်ကြောက်ရသည့်သဘောဖြစ်ပါ၏။
သို့ပါ၍ ဆိုခဲ့ပြီးသည့် ယိုသူမရှက် မြင်သူရှက် ဟူသော စကားအား
မန္တလေးဂေဇက်၏ တာဝန်ရှိသူမှ မန္တလေးဂေဇက်၏
စည်းကမ်းအမှတ် ( ၆ ) နှင့်၎င်း ( ၁၁ ) နှင့်၎င်း မကိုက်ညီခြင်းအား
ဖြေရှင်းပေးပါရန် လေးစာစွာ ပန်ကြားအပ်ပါသည်ခင်ဗျား။
အထူးမှတ်ချက်။ ။ ဤ ကော်မန့်ကို ကျွန်ုပ်မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပုသည်
သွားများကို အစွမ်းကုန်ဖြဲ၍ ရေးလိုက်ပါသည်။
ချစ်တာတော့ချစ်တာပေါ့..ဒါပေမဲ့…အင်း ….ချစ်တာပေါ့နော် ..ဟီးး
ကိုးရီးယားကား အကျိုးဆက်တွေ.လို. ထင်တယ်ဗျာ မြန်မာလေးတွေ. အတုမယူသင်.တာ ယူနေတည်းဗျာ…စိတ်မကောင်းစရာပဲ နောက်တစ်ခါတွေ.ရင် ဓါတ်ပုံတင်ပြနော် ..
ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်ပြီး ခေတ်မှီနေကြတာ နဲ့ တူတယ်။
တခါမှတော့ မဝေ ပြောသလို မမြင်ဖူးဖူး။
စုံတွဲတွေ ခဗျာ လည်း
ချိန်းစရာ ၊ တွေ့ စရာ နေရာ ရှားပါးတယ် မလား
တည်းခိုခန်း သွားပြန်တော့လဲ သွားပြန်ပြီ ဖြစ်ရဦးမယ်
လူပျိုကြီး ဖြစ်မယ် ထင်တယ်
ရည်းစား သို့ မဟုတ် ချစ်သူ တစ်ယောက် ထားကြည့်လိုက်ပါ
သူ တို့တတွေ ကို
ချစ်ကြပါ ချစ်ကြပါ ဒါပေမဲ့ ထိန်းသိန်းကြအုန်းမှပေါ့
အခုမြန်မာမိန်းကလေးယောင်္ကျားလေးအများစု ဟာ အထက်က commentတစ်ခု မှာ ပါခဲ့တဲ့အတိုင်း ကိုရီးယားဇာတ်ကားတွေကို အတုယူမှားနေကြပါတယ်။တကယ်အတုယူသင့် ဒါက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ကိုဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ကြတယ်၊ရှေ့နေတွေ အမှုကိုဘယ်လိုဖြေရျင်းကြတယ်၊မတရားမှုတွေ ကိုဘယ်လို ဖေါ်ထုတ်ကြတယ် ဆိုတဲ့ အတုယူသင့်တာမျိူးတွေကို အတုယူတတ်ကြရင်တော့ ကောင်မွန်သင့်တော်မယ်ထင်ပါတယ်……………………………………………….